Ifektri yeshaja eyenziwe ngokwezifiso ye-USB, Abakhiqizi nabahlinzeki - Dongguan Changsen Electronic Technology Co., Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ishaja Power Circuit Board > Ishaja ye-USB
Ngokunikezwa kokuqina kwayo, i-PCB yokuthenga izinto ezihlinzekwa ngumkhiqizo ezifanele, amahora we-720 wokuphakelwa kwamandla nokuphazamiseka kokuhlolwa kokuguga, ukuqina okuphindiwe kokuqinisekisa, ibhodi lesifunda lisethe ibhokisi le-fuse othomathikhi, i-voltage ephezulu noma ukuvikeleka okuzenzakalelayo kwesekethe, ukuvikeleka okuzenzakalelayo kwebhodi lesifunda okuzenzakalelayo ngemuva komsebenzi, ishaja esetshenziswa kumaselula, kumakhompyutha wethebhulethi, okokuxhumana neminye imikhiqizo ye-elekthronikhi
Amapharamitha weshaja we-1.USB
Ukufaka 100 ~ 240V 50 / 60Hz 1.5a
60 w okukhipha 5 v - 3 A, 9 v - 2 A, 12 v 1.5 A
4 i-USB folding plug design
Izici 2. kanye nokusetshenziswa kwemikhiqizo yokuphakelwa kwamandla kweshaja
1) Unjiniyela unokwakheka okuzinzile kochungechunge lokuphakelwa kwamandla, kanye nokukhiphayo i-voltage parameter yesifunda izinze ngokuqhubekayo ukuvimbela i-voltage ukushintshashintsha kokubanga ukulimala empilweni yomkhiqizo.
2) Ngokucabanga ngokuqina kwayo, ibhodi lesifunda lizothenga umkhiqizo ofanelekayo izinto zokuhlinzeka, yenza ukuguga nokuhlola amahora angama-720 ngaphandle ukuphazamiseka, futhi uqinisekise kaningi ukuqina kwayo. Ibhodi lesifunda lizoba ifakwe othomathikhi ibhokisi fuse, high-voltage noma short-circuit okuzenzakalelayo ukuvikela, bese ubuyisela ngokuzenzakalela ibhodi lesifunda ngemuva kokuphepha.
Uhlelo lokungasebenzi luqinisekisa amandla nokuvikela okwanele
1) Ishaja isidlulile izitifiketi ze-3C ne-CQC zobuchwepheshe bukazwelonke izikhungo
2) Sizoklama imishini ekhethekile yokuhlola umkhiqizo wethu ngamunye. Yonke imikhiqizo isivivinyo sesipiliyoni. Hhayi ukuhlolwa okungahleliwe. Lesi ngesinye semishini yokuhlola umkhiqizo.
1) Amashaja ajwayelekile angaba sesitokisini futhi ahanjiswe ngosuku olufanayo.
1) Inkokhelo indlela: inkokhelo engu-30% kusengaphambili, ibhalansi ekhokhelwe ngemuva kokuthunyelwa.
2) Umkhumbi ngokushesha uma inani lendawo lihlangabezana nezimfuneko.
Ngemuva ukuthengiswa: 1. Uma kuyinkinga yekhwalithi yomkhiqizo uqobo, kuholela ukunganeliseki. Sizosiza ikhasimende ukuxazulula inkinga ngokushesha kungenzeka ngesikhathi esivunyelwene ngaso. 2. Uma umkhiqizo ungeke usetshenziswe ngokujwayelekile ngenxa ezicini zabantu. Sichazela ikhasimende imbangela yenkinga, okukhombisa ukuthi inkinga enjalo ayihlanganisiwe ngewaranti yethu, bese unikezela ezinye izixazululo zekhasimende ngokusho kwenkinga yekhasimende.
Amathegi ashisayo: Ishaja ye-USB, eyenziwe ngokwezifiso, iFekthri, Abenzi nabahlinzeki